Isibheno | Law & More | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
Kuqhelekile ukuba elinye okanye omabini amaqela angavumelani nesigwebo kwimeko yabo. Ngaba awuvumelani nesigwebo senkundla? Ke kukho inketho yokubhena kwesi sigwebo kwinkundla yesibheno. Nangona kunjalo, olu khetho alusebenzi kwimicimbi yoluntu enomdla wemali ongaphantsi kwe-1,750 ye-EUR. Ngaba uyavumelana nesigwebo senkundla? Emva koko usenokuzibandakanya kwinkqubo yenkundla. Emva kwayo yonke loo nto, umlingane wakho naye unokuthatha isigqibo sokubhena.
NGAXELAYO NGEVERDICT YENTLANGANISO?
> Ikota yesibheno
> Isibheno kwinkundla yezolawulo
> Emva kwesibheno
Ukubanakho ukubhena kulawulwa kwisihloko se-7 seKhowudi yeNdawo yaseDatshi. Oku kunokwenzeka kusekwe kumgaqo wokuliphatha eli tyala kwizihlandlo ezibini: kwimeko yokuqala ihlala inkundla nakwinkundla yesibheno. Kukholelwa ukuba ukuphatha amatyala ngamatyala amabini kuphucula umgangatho wobulungisa, kunye nokuzithemba kwabemi kulawulo lobulungisa. Isibheno sinemisebenzi emibini ebalulekileyo:
• Umsebenzi wolawulo. Kwisibheno, cela inkundla ukuba iphinde ihlole ityala lakho kwakhona. Inkundla ke ijonge ukuba ngaba ijaji ekuqaleni izifumene ngokuchanekileyo izibakala, yawusebenzisa ngokufanelekileyo umthetho nokuba sele igwebe ngokufanelekileyo. Ukuba akukhange kube kunjalo, isigwebo somgwebi wokuqala siya kubhangiswa yinkundla.
• Beka ithuba. Kungenzeka ukuba ukhethe isiseko esingokwasemthethweni esingalunganga, ekuqaleni, khange ivele ingxelo yakho ngokwaneleyo okanye ubonelele ubungqina obuncinci kakhulu kwingxelo yakho. Umgaqo wokuyeka ngokupheleleyo usebenza kule nkundla yesibheno. Ayisiyiyo kuphela yonke into enokuthi ivele kwinkundla kwakhona ukuze iphonononge, kodwa wena njengeqela lesibheno uya kuba nethuba lokulungisa iimpazamo ozenzileyo ekuqaleni. Kukho ukubakho kwesibheno sokonyusa ibango lakho.
Ukuba ukhetha inkqubo yokubhena kwinkundla, kufuneka ufake isibheno kwithuba elithile. Ubude bexesha lelo lixhomekeka kuhlobo lwetyala. Ukuba umgwebo uphathelene nomgwebo ka-a inkundla yamatyala, uneenyanga ezintathu ukusuka kumhla womgwebo wokufaka isibheno. Ngaba kuye kwafuneka ujongane nokushwankathela inkqubo kwasekuqaleni? Kwimeko enjalo, ixesha leeveki ezine kuphela lokwenza isicelo kwinkundla. Uyenzile inkundla yolwaphulo-mthetho Thatha ingqalelo kwaye ugwebe ityala lakho? Kwimeko enjalo, uneeveki ezimbini kuphela emva kwesigqibo sokubhenela kwinkundla.
Kuba iimeko zokubhena zisebenza ngokuqinisekisa ngokusemthethweni, le mihla ebekiweyo kufuneka ilandelwe ngqo. Ixesha lokubhena ke ngumhla wokugqibela ongqongqo. Awuyi kufakwa sibheno ngaphakathi ngeli xesha? Emva koko ufike emva kwexesha kwaye ngenxa yoko akunakuvuma. Kuphela kukwezo meko zibodwa xa isibheno singafakwa emva kokuphela kwexesha elibekiweyo lesibheno. Oku kunokuba njalo, umzekelo, ukuba unobangela wesibheno esigqibeleleyo yimpazamo yejaji ngokwayo, kuba uthumele loo myalelo kumaqela kade kakhulu.
Kwimeko yesibheno, imigaqo esisiseko kukuba ubonelelo malunga nemeko yokuqala luyasebenza nakwindlela yokubhena. Isibongozo ke ngoko siqala nge isamani Kwimo enye kunye neemfuno ezifanayo kunye nezo zokuqala. Nangona kunjalo, akuseyomfuneko ukuchaza izizathu zesibheno. Ezi zizathu kufuneka zinikezwe kuphela kwingxelo yezikhalazo ilandelwa.
Inqanaba lesibheno lizo zonke izizathu ezibekwa ngumfaki-sicelo ukuze avele ukuba isigwebo senkundla sahlulele ukubekwa ecaleni. Ezo nxalenye zesigqibo ekungekho sizathu sokubekwa kuso, ziya kuhlala zisebenza kwaye azisayi kuphinde zixoxwe ngesibheno. Ngale ndlela, mpikiswano ngesibheno kwaye ke i-batten esemthethweni inomda. Kubalulekile ke ngoko ukuphakamisa isichaso esiqiqisayo kwisigqibo esinikezelwe ekuqaleni. Kubalulekile ukwazi kule meko ukuba umhlaba obizwa ngokuba jikelele, ojolise ekuziseni imbambano kuyo yonke imeko yesigwebo, ayinakho kwaye ayizukuphumelela. Ngamanye amagama: izizathu zesibheno kufuneka ziqulathe inkcazo ekhonkrithiyo icace gca kwelinye icala kwimeko yezokhuseleko ukuba yeyiphi kanye inkcaso.
Isiteyitimenti sezikhalazo siyalandela ingxelo yokhuseleko. Ngokwalo icala, ummangalelwa kwisibheno angabeka phambili izizathu ezichasene nesigwebo esichaseneyo kwaye aphendule kwisimangalo sombheni wezikhalazo. Ingxelo yezikhalazo kunye nengxelo yezokhuselo zihlala ziphelisa ukutshintshiselana ngezikhundla kwisibheno. Emva kokutshintshaniswa kwamaxwebhu abhaliweyo, akuvumelekanga ukuba kubekwe amabala amatsha, nokuba kunyuswe ibango. Kuyacaciswa ke ngoko ukuba ijaji ayisakwazi ukuhoya izizathu zesibheno ezithe zangeniswa emva kwengxelo yesibheno okanye yokuziphendulela. Kukwanjalo ukwandiswa kwebango. Nangona kunjalo, ngendlela eyahlukileyo, umhlaba usamkeleka kamva ukuba elinye iqela linike imvume, isikhalazo sivela kuhlobo lwempikiswano okanye imeko entsha ivele emva kokuba kungenisiwe amaxwebhu abhaliweyo.
Njengenqaku lokuqala, umjikelo obhaliweyo kwimeko yokuqala uhlala ulandelwa isimangalo phambi kwenkundla. Kukho okwahlukileyo kulo mgaqo kwisibheno: isimangalo phambi kwenkundla siyakukhetha kwaye ke asiyonto eqhelekileyo. Uninzi lweemeko ke zihlala zixazululwe ngokubhaliweyo yinkundla. Nangona kunjalo, omabini amaqela angacela inkundla ukuba imamele ityala labo. Ukuba iqela lifuna ukuxoxwa kwetyala phambi kwenkundla yezibheno, inkundla kuyakufuneka iyivumele, ngaphandle kokuba kukho iimeko ezizodwa. Ukuza kuthi ga ngoku, umthetho-onelungelo lokufaka isikhalazo lihleli.
Inyathelo lokugqibela kwinqubo yomthetho ekubhengeni umgwebo. Kwesi sigwebo, inkundla yezibheno iyakubonisa ukuba isigwebo senkundla sangaphambili besichanekile na. Ngokwenyani, kungathabatha ukuya kwiinyanga ezintandathu nangaphezulu ukuba amaqela ajongane nesigwebo sokugqibela senkundla yesibheno. Ukuba izizathu zalowo ufaka isibheno ziyaxhaswa, inkundla iyakubeka bucala isigwebo esichasene neso sigwebe ityala ngokwalo. Ngaphandle koko inkundla yesibheno iya kuthi ixhase isigwebo esichaseneyo ngokufanelekileyo.
Isibheno kwinkundla yezolawulo
Ngaba awuvumelani nesigqibo senkundla yezolawulo? Emva koko unakho nokubhena. Nangona kunjalo, xa ujongene nomthetho wolawulo, kubalulekile ukuba wazi ukuba kwimeko leyo kuya kufuneka ujongane namanye amagama. Kukho ixesha elingangeeveki ezintandathu ukusukela kwixesha lokumenyezelwa kwesigwebo somgwebi wolawulo, apho ungasifaka khona isibheno. Kuya kufuneka ujongane neminye imeko onokuthi uguqukele kuyo kwimeko yesibheno. Yiya kweyiphi inkundla kuxhomekeke kuhlobo lwetyala:
• Ukhuseleko lweNtlalontle kunye nabasebenzi baseburhulumenteni. Amatyala okhuseleko lwentlalo kunye nemithetho yabasebenzi baseburhulumenteni iyaphathwa kwi-Central Board of Rules (CRvB).
• Umthetho wezoqoqosho wolawulo kunye nezobulungisa. Imicimbi kwimeko, phakathi kwezinye izinto, UMthetho woKhuphiswano, umThetho wePosi, UMthetho weZinto eziThunyelwayo kunye noMthetho woNxibelelwano ziqhutywa kwisibheno yiBhodi yeZibheno kwiShishini (i-CBb).
• Umthetho wokufudukela kwelinye ilizwe kunye neminye imicimbi. Amanye amatyala, kubandakanya namatyala okufudukela kwelinye ilizwe, ajongana nesibheno liCandelo loLawulo lwezoLawulo lweBhunga likaRhulumente (i-ABRvS).
Ngokwesiqhelo, amaqela abambelela kwisigwebo senkundla yesibheno kwaye ityala labo ke liyagqitywa kwisibheno. Nangona kunjalo, awuvumelani nesigwebo senkundla kwisibheno? Ke kukho ukhetho lokufaka i-cassation kwiNkundla ePhakamileyo yaseDatshi ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintathu emva kwesigwebo senkundla yesibheno. Olu khetho alusebenzi kwizigqibo ze-ABRvS, i-CRvB kunye ne-CBb. Emva kwayo yonke loo nto, iingxelo zala maqumrhu ziqulathe izigwebo zokugqibela. Akunakwenzeka ke ngoko ukuba ucelomngeni kwezi zigwebo.
Ukuba kunokwenzeka ukuba u-cassation akhona, kuya kufuneka kuqatshelwe ukuba akukho gumbi lokuvavanywa kwembambano. Izizathu ze-cassation nazo zincinci. Emva kwayo yonke loo nto, ukuqinisekiswa kunokumiselwa kuphela njengoko iinkundla eziphantsi zingakhange zisebenzise umthetho ngokuchanekileyo. Yinkqubo enokuthatha iminyaka kwaye ibandakanye neendleko eziphezulu. Kubalulekile ke ukuba yonke into iphume kwinkqubo yesibheno. Law & More ndiyavuya ukukunceda ngale nto. Emva kwayo yonke loo nto, ukubhenela kuyinkqubo entsonkothileyo kulo naluphi na ulawulo, ngokufuthi kubandakanya izinto eziphambili. Law & More Amagqwetha aziingcali kwimicimbi yolwaphulo-mthetho, kwezolawulo nakwezoluntu kwaye ayonwabile ukukunceda kwinkqubo yokubhena. Ngaba unayo eminye imibuzo? Nceda unxibelelane Law & More.